‘वीरेन्द्रले भने, यी कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएपछि ठीक भइहाल्छन्’
एक दिन गिरिजाबाबु र भट्टराईजीले प्रस्ताव राख्नुभयो- ‘अब तपाईं नै प्रधानमन्त्री बसिदिनुहोस्, कांग्रेसले तपाईंलाई नै समर्थन गर्छ ।’ मैले भनेँ- ‘यो कसरी हुन सक्छ ? आज एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुने, अर्को दिन कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने । यो त मबाट सम्भव छैन ।'
२३ वैशाख २०७७ मंगलबार
०५१ सालको चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि सरकार बनाउन उसको बहुमत थिएन ।
कम्युनिस्टहरूसँग त्यसबेलासम्म मेरो खासै सम्पर्क थिएन । पहिला उनीहरू प्राय: भूमिगत भएर बस्ने भएकाले मेरो खासै सम्पर्क नभएको हो । मलाई कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको पनि थियो । सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला एक दिन मलाई दरबारमा बोलाइयो । दर्शनभेटका क्रममा राजा वीरेन्द्रबाट एमालेकै सरकार बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइबक्सियो ।
‘एक पटक उनीहरूलाई मौका दिऊँ न । अल्पमतको सरकार हुन्छ, राम्रो काम नगरे तिमीहरू फाल्न सकिहाल्छौँ । एक पटक यिनीहरूको काम हेरौँ न’, राजाबाट हुकुम भयो ।
‘सरकार यी कम्युनिस्ट हुन्, एकचोटि सरकार हातमा परेपछि छाडदैनन् र तत्कालीन रणनीति भनी जे पनि गर्छन् । यिनीहरूलाई किन सरकार बनाउन दिने ?’, मैले भनेँ ।
‘सत्तामा आएपछि सबै ठीक भइहाल्छन् लोकेन्द्र, फेरि यिनीहरू जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट पनि त हैनन् नि । यिनीहरू पनि ठिक भइहाल्छन् । यिनलाई हामीले संसदीय अभ्यासमा आउनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ’, राजाले भनिबक्सियो ।
तत्कालीन संविधानको धारा ४२ (२) अनुसार संसद्को ठूलो दल एमालेको सरकार गठनका लागि छलफल सुरु भयो । त्योबेला उहाँहरूले मसँग ‘तपाईंहरू पार्टीगत रूपमा हैन, व्यक्तिगत हैसियतले सरकारमा सहभागी हुनुस्’ भन्नुभएको थियो । त्यसलाई हामीले अपमानको रूपमा लियौँ ।
मनमोहनजीको सरकार ढलेपछि स्वत: अब कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धन सरकार गठन हुने भयो । मेरो धारणा के थियो भने सरकारमा धेरै मान्छे नपठाऊँ, सानो मन्त्रिमण्डल बनाऊँ । जम्मै सरकारमा जाने हो भने पदलोलुपता झल्किन्छ, त्यसबाट जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन र पार्टीको बढ्दै गएको साखमा धक्का लाग्छ भन्ने मेरो आग्रह थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो । यस्तैमा एक दिन किसुनजीले मलाई फोन गर्नुभयो ।
‘तपाईं र सूर्यबहादुरजी त मन्त्री बन्ने कुरा आएन । बाँकी तपाईंहरूका सत्रै जना सांसदलाई पठाउनुहोस्, हामी मन्त्री बनाउँछौँ’, किसुनजीले भन्नुभयो ।
किसुनजीले त्यसो भनेपछि सूर्यबहादुरजी पनि ‘सबैलाई सरकारमा पठाऊँ’ भन्न थाल्नुभयो । हामीले १७ जना त हैन, तीमध्ये धेरैलाई मन्त्री बनायौँ ।
‘योजना आयोगमा नियुक्त भइसकेकालाई म हटाउनुस् त भन्दिनँ, भागबन्डा नै गर्ने हो भने एक जना त मेरो पक्षको मानिस पनि राख्नुस्’, मैले शेरबहादुरजीलाई भनेँ ।
कुरो के थियो भने योजना आयोगमा राप्रपाबाट मनोनीत भनिएका दुवै जनाको पार्टीसित टाढाको सम्बन्ध पनि थिएन । उनीहरूको सिफारिस कसले र के स्वार्थवश गर्‍यो भन्ने अन्योल हुँदा मेरा साथीहरू साह्रै उत्तेजित थिए । उनीहरूको भनाइ त ति दुई जनालाई हटाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर मैले एक जना थपे पुग्छ भन्ने कुरोमा मनाएको थिएँ ।
देउवाजीले भोलिभोलि भन्दै टार्नुभयो, थप्नुभएन ।
तैपनि हामीले केही भनेनौँ । एउटा उक्ति नै छ, मित्रता गरिसकेपछि एक किलो नुन चबाएजस्तो स्वाद पनि पचाउनुपर्छ ।
‘तपाईंहरूबाट कति भोट आउँछ त ?’, मैले सोधेँ ।
‘कसलाई थाहा छ त ?’, मैले सोधेँ ।
पछि मैले के चाल पाएँ भने कांग्रेसका केही नेताहरू र हाम्रो पार्टीभित्रैका केही नेताहरूले राजेश्वरजीलाई हराउने योजना बनाइसकेका रहेछन् । त्यो थाहा पाएपछि हामी चिन्तित थियौँ । त्योबेला दीपक बोहराजी हाउसमा त हुनुहुन्थेन तर कताकताबाट छिरेर हाउसभित्र एमाले क्याम्पमा पुग्नुभयो । एमालेले आफ्नो चार पाँच भोट राजेश्वरजीलाई दिने भएको कुरो सुनाउनुभयो । अनि त एमालेको भोटसमेत ल्याएर राजेश्वरजीले पनि जित्नुभयो, उता कांग्रेसको वचनविपरीत हाम्रो पार्टीका केही साथीहरूको भोट पाएर रवीन्द्रनाथ शर्माजीले पनि जित्नुभयो । हाम्रो पार्टीका तर्फबाट जित्न त दुई जनाले जित्नुभयो तर त्यो इमानको राजनीति भएन । बेइमानी भयो । हामीले प्रधानमन्त्री देउवाको भर गरेको, उहाँले धोका दिनुभयो । एमालेले सहयोग नगरेको भए राजेश्वरजीले नजित्ने । कांग्रेसप्रति भर पर्ने अवस्था रहेन । विश्वासको संकट उत्पन्न हुँदै गयो । यसैबीच राप्रपाकै केही मन्त्रीहरूले मलाई (संसदीय दलको नेता) लाई अटेर गर्ने गरेकाले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न होला भन्ने मैले अड्कलेँ र यस्तो स्थितिलाई झन् चर्कायो ।
‘शेरबहादुरजी, तपाईंले गर्छु भन्ने काम पनि गर्नुभएन । तपाईंले नगरेको कि गर्न नसकेको ? मेरा साथी धेरै दु:खी छन् । उनीहरूले मलाई तिमीले यो कुरा प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याऊ, हामी झन् पछाडि पछाडि पर्दै छौँ भनेका छन्’, मैले भनेँ ।
‘म यसको पक्षमा छैन भने हस्ताक्षर मकहाँ किन राख्नुहुन्छ ?’, मैले भनेको थिएँ ।
सदन पुनर्जीवित हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका एकाध साथीहरू ‘शेरबहादुरजीलाई नबनाएर अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए के हुन्छ ?’ भन्दै मकहाँ आउनुभएको थियो ।
त्यसबेला कांग्रेसका दुई सांसदले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो । एमालेका नेताहरू र मैले ‘उहाँहरूले संसद्‌बाट राजीनामा दिने, मैले उहाँहरूलाई राज्यमन्त्री बनाउने’ वचन दिएका थियौं । पैसोको चलखेल भएको वा गिरिजाबाबुले हमीकहाँ पठाएको भन्ने हल्ला निराधार थियो । एमालेका नेताहरूले उहाँहरूले संसद्‌बाट राजीनामा दिए उनीहरूको साविक क्षेत्रबाट जिताएर ल्याउने वचन पनि दिनुभएको थियो । त्यस्तो नभए, उहाँहरूले राजीनामा गरी स्वतन्त्र बसे पनि मैले केही दिनपछि मन्त्री बनाउन मिल्थ्यो । तर विपक्षी कांग्रेसका सांसदलाई मन्त्री बनाउनु अनैतिक र अव्यावहारिक हुन्थ्यो । अत: दुवै जना खासगरी मसित रिसाएर बस्नुभयो । गिरिजाबाबुले ती दुई जनालाई पार्टीबाट निकाल्नुभएन, यसलाई गिरिजाबाबु र मेरोबीचमा साँठगाँठ रहेको प्रमाणको रूपमा शेरबहादुरजीले भित्रभित्र भन्न थाल्नुभएको थियो । तर यस्तो कुरो पटक्कै होइन । मलाई लाग्छ, यो गिरिजाबाबुको दूरदर्शिता थियो । किनभने अन्दाजी ७ महिनापछि मेरोविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुने बेला ती दुई जना कांग्रेसका पक्षमा न उभिएका भए अर्कै वातावरण बन्थ्यो र सो प्रस्ताव पारित हुन गाह्रो पर्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन । अरू ठूलो समस्या त केही थिएन । एलर्जीको समस्या भइरहन्थ्यो । मलाई कोठाभित्र हाउस डस्टले एलर्जी गराइरहने । कालिन (गलैँचा) बिच्छ्याएको कोठामा त झन् बस्नै सकिन्नथ्यो । सदनमा डस्ट रोक्न सकिने कुरै आएन । मास्क लगाएर सदनमा जाने कुरा पनि आएन । म एभीललगायतका औषधी खान्थेँ र काम चलिरहेको थियो ।
जेहोस्, मेरै पालामा स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो, ०५४ सालमा ।
स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालेमल हुने भएपछि मैले एउटा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको कमिटी नै बनाएको थिएँ । वार्ताका क्रममा मुलुकका १९ नगरपालिकाको उप–मेयरमा एमाले र मेयरमा राप्रपालाई जिताउने, बाँकी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नेबारे कुरा चलिरहेको थियो । जिल्ला तहमा पनि गाउँ तहको चुनाव सकिएपछि सहमति गर्ने कुरा चलिरहेकै बेला पार्टीका महासचिव पशुपतिशमशेरजीले ‘स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाले कांग्रेससँग तालमेल गर्ने’ वक्तव्य दिनुभयो । र, केही मन्त्री भित्रभित्र सरकार गिराउने कुरामा लागिसकेका हुनाले हो क्यारे, कमिटीका मन्त्रीहरूले पनि ध्यान दिएनन् । उनीहरूमध्ये केहिले हाम्रोपट्टिका नयाँ नियुक्ति गर्न बाधा पुर्‍याइएरहेको कुरो बुझे पनि म चुप थिएँ । तर महामन्त्रीज्यूको वक्तव्यका बाबजुद कांग्रेससँग कहीँ पनि तालमेल भएन । महासचिवबाट त्यस्तो विज्ञप्ति आएपछि एमालेका साथीहरूले मलाई ‘के गर्नुहुन्छ त ?’ भन्नुभयो । मसँग जवाफ थिएन । अनि मेरै जिल्ला बैतडीमा जिल्ला सभापति राप्रपालाई र उपसभापति एमालेलाई जिताउने सहमति भयो । कुरा गर्दाखेरि वार्ता टोलीमा खटिएका एक–दुई जना मन्त्रीले पनि मन लगाई एमालेसित सहमति गर्न ध्यान दिएनन्, उनीहरूलाई मेरो सरकार हटाउने देशी–विदेशीहरूको षडयन्त्रको भनक लागिसकेको थियो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसबेला मलाई लाग्यो, पद्‌मसुन्दर लावतीलाई मन्त्री बनाउन पाएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन । तर उहाँलाई बनाउन सकिन्नथ्यो ।
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिचाहिँ बंगलादेशको फूलबारी नाकामार्फत हामीले पारवहन मार्ग पायौँ । त्यसबेलादेखि बंगलादेशसँग पनि हाम्रो व्यापार सम्बन्ध अघि बढ्यो । गुजरालजीको भ्रमणकै बेला काठमाडौँमा नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको शिलान्यास गरिएको थियो । भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरको शिलान्यास (सन् १९९७ जुन ६) मा भारतीय प्रधानमन्त्री गुजराल र मैले संयुक्त रूपमा गरेका थियौँ । अरू पनि धेरै योजनाहरूका लागि उहाँको भ्रमणका बेला सहयोग प्राप्त भएको थियो । उहाँको भ्रमण अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल भ्रमण भनी परराष्ट्रविद्‌हरूले समीक्षा गरेका थिए ।
कन्याकुमारीपछि बम्बई गइयो । बम्बईमा राज्यपालले भेटघाट र खानपानको व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । म बसेको होटलमा भारतका प्रख्यात अभिनेता देवानन्द मलाई भेट्न आउनुभयो । नेपालप्रति उहाँको विशेष लगाव थियो किनकि धेरै पहिले उहाँको चलचित्र हरेकृष्ण हरेराम नेपालमै छायाकन भएको थियो । देवानन्द नेपाल आइरहनुहुन्थ्यो र उहाँको राजारानीसित पनि भेटघाट हुने गर्थ्यो । यसैगरी भारतीय फिल्मी जगत्का अर्का नायक गोविन्दा पनि आउनुभएको थियो । गोविन्दाकी श्रीमती सुनिता नेपाली नै हुनुहुन्छ । (पछि त गोविन्दा भारतको सांसद पनि हुनुभयो र दुई–तीनचोटि नेपाल आउनुभयो । नेपाल आउँदा उहाँ मलाई निश्चित रूपले भेट्नुहुन्छ ।)
‘यो कसरी हुन सक्छ ? आज एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुने, अर्को दिन कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने । यो त मबाट सम्भव छैन । मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन, यो कुरा नगरूँ । बरु कात्तिकमा हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन छ । त्यतिबेलासम्म मलाई हुन दिनुस् । त्यसपछि चाहिँ एमालेसँग पनि प्रस्ट कुरा गरेर म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिउँला’, मैले भनेको थिएँ ।